घरज्वाई बस्ने केटा खोज्दै ज्योति मगर : कसरी बनाइन् भव्य महल, लग्जरी कार ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/घरज्वाई बस्ने केटा खोज्दै ज्योति मगर : कसरी बनाइन् भव्य महल, लग्जरी कार ?
काठमाडौं । चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका तथा मोडल ज्योति मगरले काठमाडौंमा भव्य घर बनाएकी छिन् । कलाकारिता बाटै उनले काठमाडौंमा घर बनाएको कुरा पहिले नै बताएकी थिइन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
शुरुवातमा उत्ताउला र उच्छृंखल हुने गीतहरू अहिले अलिकति सुधार भएको हुन सक्ने धेरैको बुझाई रहेको छ । उनको घरमा उनका दिदीका छोरा पनि बस्दै आएका छन् ।